China Izingane Zisebenzisa I-Sanitizer Hand TECH-BIO ifektri nabakhiqizi | Zhongrong
Isandla se-Sanitizer TECH-BIO
Izingane Zisebenzisa I-Hand Sanitizer TECH-BIO
I-50ml Hand Sanitizer TECH-BIO
500ml Umswakama Wesandla Sokuhlanza I-TECH-BIO
Isicoci Sandla se-OEM
I-75% Utshwala Obulala Amagciwane I-TECH-BIO
50ml 75% Utshwala Obulala Amagciwane I-TECH-BIO
500ml 75% Utshwala Obulala Amagciwane I-TECH-BIO
2.5L 75% Utshwala Obulala Amagciwane I-TECH-BIO
Ama-75% Otshwala Obulala Amagciwane ku-IBC / Drum
Sula Ukubulala Amagciwane I-TECH-BIO
1 piece Utshwala / Hyamine Sula
10 izingcezu Utshwala / Hyamine Sula
Izicucu ezingama-50 Utshwala / iHyamine Sula
Izicucu eziyi-150 Utshwala / iHyamine Sula
Izinto Zokusetshenziswa Kwemvelo
I-Ethyl Acetate （≥99.7%）
I-50ml Hand Sanitizer Gel TECH-BIO
I-500ml Mositure Hand Sanitizer Gel TECH-BIO
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 isipiliyoni sigxile embonini yokubulala amagciwane
Ngaphansi kwethonya le-covid-19, Hand I-Sanitizer iba yisidingo sethu sokuzinakekela empilweni yethu yansuku zonke ikakhulukazi kwezinye izindawo zomphakathi ezifana nesikole, isibhedlela, isuphamakethe, ihhotela, njll. Lo mkhiqizo uqukethe i-75% yotshwala engabulala i-coronavirus namanye amagciwane ukuvikela impilo yethu kahle. Iphakethe le-30ml lenzelwe ngokukhethekile ukusetshenziswa kwezingane futhi lingaqedwa cishe cishe isigamu senyanga, ngakho-ke liphilile ezinganeni.Singakwazi ukwenza ngokwezifiso iphakethe ngenxa yezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende. Njengoba sikhiqiza utshwala obuhlaza, intengo yethu incintisana kakhulu nekhwalithi ephezulu. Ngaphandle kwalokho, sidlulile ukuqinisekiswa kwe-CE, FDA, ne-ISO. Sethula umkhiqizoI-TECH-BIO ukuyenza ibe ngumkhiqizo onguNo. 1 wokwehlisa amagciwane eChina njengoba sinotshwala obusezingeni eliphakeme eChina. Singumholi eChina kubuchwepheshe be-ethanol. Sine cishe 500,000 square metres workshop endaweni esifundazweni Hebei, China. Inkampani yethu yasungulwa ngonyaka we-1999. Kodwa-ke, singamukela futhi i-OEM ne-ODM ngazo zonke izinhlobo zokuhlanza izandla. Ngibheke phambili ekubeni ngumlingani wakho womhlaba wonke futhi ufeze isimo sokuwina!
Hlonishwa njengomunye wamabhizinisi aseChina High-Tech, iZhongRong Technology Corporation Ltd. (ikhodi yamasheya: 836455) igxile emkhakheni weBiochemical, Pharmaceutical Chemicals, Fine Chemicals neNew Energy. Ngokuya ngemishini "yokukhuthaza inqubekela phambili yomphakathi ngokusimama okuqhubekayo", inkampani igxila ku-R & D, ekukhiqizeni nasekukhangiseni i-ethanol kanye nemikhiqizo yayo ephezulu kanye nengezansi eminyakeni engamashumi amabili, futhi izinikela ekubeni ngumhlinzeki oncintisana kakhulu we-ethanol engeyona okusanhlamvu.
Izithako ezisebenzayo: U-Ethyl Alcohol 75% (V / V)
Inhloso: Elwa namagciwane
I-Net Volume: 30ml
Izinzuzo: Utshwala busekelwe · Kuphephe kwezemvelo · Triclosan Mahhala · Unempilo
Ubheka: Ukusiza ukuqeda amabhaktheriya esikhunjeni angadala izifo nokuthambisa isikhumba.
Ukuqondiswa: Beka inani elincane esandleni bese ulihlikihla kuze kome.
Izexwayiso: Ukusetshenziswa kwangaphandle kuphela · Kuyabhebheka · Hlala kude nokushisa nelangabi ∙ Gwema ukuxhumana namehlo nesikhumba esonakele.
Izithako Ezingasebenzi: Amanzi Ahlanziwe, ICarbopol, Isopropyl Alcohol, Triethanolamine
Olunye Ulwazi: Kugcinwe endaweni eyomile enophawu.
Usuku Eliphelela ngalo: iminyaka engu-2
Ilebhu ihlolwe: 99.99% Kuyaphumelela ukulwa namagciwane ajwayelekile
Kwenziwe yiZhongrong Technology Corporation Ltd.
Faka: Cha. 1 Changqian Road, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province, China
Lolu hlobo lwe-sanitizer yesandla lufanele izingane njengoba kungekho phunga ku-iresiphi. Azikho izinto eziyingozi nezinobuthi ezinganeni. Iphakethe lamabhodlela epulasitiki likhwalithi ephezulu futhi akulula ukuthi lephulwe kalula. Umthamo ongu-30ml uyaphatheka futhi kulula ukuwusebenzisa noma yikuphi lapho ubulala amagciwane ezinganeni. Kuzoba ukukhetha kwakho okulungile ukuvikela impilo yezingane kude namagciwane ajwayelekile kanye ne-covid-19. Futhi singenza i-OEM ne-ODM ukwenza ngezifiso ivolumu ehlukile nepakethe design enelogo yeklayenti uqobo.
Langaphambilini I-50ml Hand Sanitizer Gel TECH-BIO
Ikheli: Igumbi1602 Vanke Center, No.970 Nanning Rd., Xuhui District, Shanghai 200235 （SH Office）
Ucingo: +86 21 6470 0198
I-WhatsApp: +86 18821253359